Naverina indray ny lalao football mozambikana ary vehivavy avokoa ny mpitsara telo tamin’ny fisantarana izany · Global Voices teny Malagasy
Naverina indray ny lalao football mozambikana ary vehivavy avokoa ny mpitsara telo tamin'ny fisantarana izany
Niverina tamin'ny 16 Janoary indray ny taom-pilalaovana
Voadika ny 03 Febroary 2021 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Română , English, русский, Português
Andro faha-22 Moçambola Maxaquene 2 – 1 FC. Chibuto, avy @ Verdade izay nametrahana lisansa CC BY 2.0
Niverina holalaovina tamin'ny 16 janoary indray ny fifaninanam-pirenena ho tompondakan'i Mozambika amin'ny sehatra matihanina amin'ny football, izay fantatra amin'ny anarana hoe Moçambola rehefa niato nandritra ny 10 volana noho ny valan'aretina COVID-19.
Nisy zava-baovao ny lalao fanokafana nifanandrinan'i ENH Vilankulo tamin'i Ferroviário de Nacala, izay niafara tamin'ny fandresen'i Vilankulo: sambany teo amin'ny fifaninanana ho tompondaka no vehivavy avokoa ny mpitsara tamin'ny lalao.
Nosoritan'ny gazetim-panatanjahantena Lance tao an-toerana ny tantaran'ireo vehivavy telo mpitsara lalao:
Ny ekipam-pitsarana dia hotarihan'i Ema Paulo Novo, miaraka amin'i Roda Mondlane (mpanampy voalohany) sy Olinda Augusto (mpanampy faharoa), raha i Mário Tembe kosa no ho mpitsara fahaefatra.
Tsy zoviana amin'ny football mozambikana intsony i Ema Paulo Novo, ary ity mpitsara iraisampirenena ity no iray amin'ireo vitsy navitrika tamin'ny herintaona nitsara lalao nandritra ny amboara COSAFA vehivavy, notontosaina tao amin'ny Port Elizabeth tao Afrika Atsimo.
Tsy hisy mpijery ny fifanandrinana Moçambola mandra-pisian'ny filazana vaovao, natao izany hisorohana amin'ny fifindran'ny COVID-19. Hatramin'ny fotoana nanoratana, nahatratra 29.396 ny fitambaran'ny tranga voarakitra ary 271 no matin'io aretina io tao Mozambika.
Misy ireo mpanohana sasany no mitaraina amin'ny toe-draharaha, toa an'i Maria Mufume, izay niteny tamin'i DW Africa tao Maputo:
Mampalahelo izany ho an'ny rehetra, satria tsy hisy ny mpanohana fa izay milalao ihany, tsy hisy ny olona handrisika.
Saingy na ireo mpilalao ihany aza dia manaiky ny maha-zavadehibe ny fepetra ifehezana ny fielezan'ny viriosy, araka izay nolazain'i Augusto Panguane, filoha-lefitra ny ligin'ny football mozambikana avo lenta azy:
Mazava loatra fa tsy maintsy apetraka amin'ny kianja rehetra ny fanasana tanana sy ny koveta fitoeran-drano. Izany no hanery antsika hanangana fepetra fa tsy olana ara-pahasalamana ny football.